Homeसमाचारआज सोमबार भगवान शिवको दर्शन गर्दै आजको राशिफल हेर्नुहोस्
August 31, 2020 admin समाचार 18265
आज राज्यबाट मान सम्मान पाइनेछ । कुटुम्बको सहयोग मिल्ने छ । घरमा अतिथीको आगमन हुनेछ । बोलीको भरमा कार्य सम्पादन हुनेछ । कुनै अप्रत्याशित काम बन्ने योग छ,झैझग_डा र विवादमा सरिक हुनु पर्नेछ,गौ माताको पूजा गर्नाले शुभ कार्यमा सफ’लता पाइन्छ, आजको शुभ अंक ३ रहेको छ ।
अनुहारमा कान्ति र म’नमा शान्ति छाउने छ । शुभकार्यको चर्चा चल्ने छ । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मि’ल्ला । प्रेम’मा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक जीव’नमा मतभेत रहनेछ,घर–गृहस्थीमा भने स’मस्या आउन सक्छ,बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ संयम रहनु होला, आजको शुभ अंक २ रहेको छ ।
आज रोकिए’को अधुरो कार्यले पू’र्णता पाउनेछ । धनार्ज’नका नयाँ स्रोतहरू पत्ता लाग्ने छन् । रोमाञ्चक यात्रा होला । प्रेमीको सहयोग प्राप्त हुनेछ । उठ्नु’पर्ने रकम हात’लागी भए पनि तत्काल खर्चनुपर्ला,आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात’लागी हुने समय छ,परिवार’मा खुशी छाउनेछ,आजको शुभ अंक ७ रहेको छ ।
आज विशिष्ट व्य’क्तिको भेटघाटले मन प्रस’न्न हुने’छ । सवारी साधनको खरिद बिक्री हुने योग छ । पारिवारिक र दाम्पत्य जीवन सुखमय पनि हुनेछ । महत्त्व’पूर्ण ठाउँमा बोली बिक्ने’छ,पति पत्नी बिचमा मन मुटाव हुनेछ,केही कुरा बोल्नु अगाडि विचार गर्नु’होला,समय राम्रो छ,आर्थिक समस्या पर्ने छ,आ’जको शुभ अंक ४ रहेको छ ।
मन खिन्न हुने स्थिति आउने छ । कार्य सम्पाद:नमा सहजता नमिल्ला । जिद्दीप:नाले गर्दा का:म बिग्रने डर छ । स्वास्थ्य’प्रति सजक रहनु होला । प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उ’ठाउन सकिनेछ,आश्वा:सन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्,पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिनेछ, आजको शुभ अंक ४ रहेको छ ।
आज इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । परि’वारमा सुख सन्तोष छाउने छ । धा’र्मिक र सांस्कृ’तिक सभा समा’रोहमा सरिक हुने समय छ । प्रतिकूल परिस्थि:तिले तपाईंको पक्षमा कोल्टे फेरेको छ,धोग क्षेत्रमा लगानी बिस्तार हुनेछ,पेटको खराबीले स्वास्थ्य’ भने कमजोर रहला, आजको शुभ अंक ५ रहेको छ ।
आज पारि’वारिक सद्भाव बढ्ने छ । आँटेको र ताके’को कार्य पुरा होला । आकस्मिक धनलाभ हुनेछ । म’हिला वर्गबाट सह’योग मिल्ने छ । यात्रा घातक बन्न सक्छ,’परिवारमा खुशी छाउनेछ,छर’छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ,स्वास्थ्य प्रति स:जक हुन एकदमै जरूरी छ ,आजको शुभ अंक १ रहेको छ ।
अरुलाई प्रभा’वित पारेर काम बन्ने । वाक्च’तुर्याइँले सङ्कल्पसिद्ध हुनेछ । आयआर्जनका क्षे’त्रमा सुधार आउने । पठनपा’ठनमा प्रगति हुनेछ । बौद्धिक चिन्तन वा विचार’ले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ,बेलुका पारिवारिक जीवनमा अनावश्यक किचलो र विवा’द हुने सम्भा’वना छ,आजको शुभ अंक ६ रहेको छ ।
प्रेममा बाधाका साथै मन कम’जोर रहला । घर परि’वारमा झै–झमेलाको अवस्था आउला । कार्यमा अव’रोध आउला । दिनको उत्तरार्धमा खर्च हुनेछ । बोली एवं व्वहा’रमा सक्दो नि’यन्त्रण राख्नु होला,घरायसी वातावरणमा केही धमिलोपन आ’उने छ,खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक संकटले सता’उन सक्छ,आजको शुभ अंक ९ रहेको छ ।
आज श्रमको उचित मुल्याङ्क’न हुनेछ । मनमा हर्ष, उमङ्ग र उत्साह छाउनेछ । कला र ग’लाको प्रभाव बढ्ने छ । शुभ स’माचार सुन्न पाइएला । अप्रिय घटना’ हुनसक्छ,मान’सम्मानमा बढ्नेछ,सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्,अना’वश्यक धन खर्च हुँदा मान’सिक चिन्ता वढ्नेछ,आजको शुभ अंक १० रहेको छ ।
शुभा’रम्भको चर्चा चल्नेछ । इच्छा र आकां’क्षा पूर्ण हुनेछ । आफ्नै दक्षतामा कार्यह’रू सम्प’न्न हुनेछन् । आफन्तको प्रग’तिमा मन रमाउने छ । अपमान वा अपजस सहनु पर्ने हुन’सक्छ,अपमान वा अपजस सहनु पर्ने हुनसक्छ,आर्थिक समस्या पर्ने छ,झग’डा पनि हुनसक्छ,स्वा’स्थ्यमा सुधार आउने छ,आजको शुभ अंक ८ रहेको छ ।
तपाईको दिन सुभ रहोस् ।।
June 15, 2021 admin समाचार 4766
May 26, 2021 admin समाचार 6131
घरबाट ५ सय बोकेर काठमाडौं छिरेका ऋषि धमला महिनाको कति कमाउँछन् ? कति छ उनको स’म्पत्ति ? जान्नुहोस्
November 19, 2021 admin समाचार 3051
पत्रकार ऋषि धम’ला प्रश्न गर्ने शैली र हाउभाउले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा चिनिएको नाम हो। हाक्काहा’क्की प्रश्न गर्ने र कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ रोचक बना’उनेमा उनको ध्यान हुन्छ। रिपोटर्स क्लब नेपा’लका सभापति, प्राइम टिभीका अध्यक्ष, नेपाली रेडियो